Captain | Know More About Nepali Movie Captain - Captain's Full Cast, Full Crew, Latest Update, News, Interviews, Awards, Reviews, Songs, trailers, full movie & more details at lensnepal.com | News
Feature Film Drama, SportsMar 01, 2019
चलचित्र ‘क्याप्टेन’ बेलायतमा प्रदर्शन गरिएको छ । कलाकार अनमोल केसी र निर्माता तथा अभिनेता भुवन केसीको उपस्थितिका बिच बेलायतमा क्याप्टेन प्रदर्शन गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन पर्यो ‘क्याप्टेन’
बुधबार साँझ परिवारसहित फिल्म हेर्न गएका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘क्याप्टेन’ हेरेपछि सञ्चारकर्मीसँग सक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै चलचित्र एकदमै राम्रो बनेको बताए ।
‘क्याप्टेन’को दोस्रो गीत सार्वजनिक, अनमोल, भुवन र निरुताको नृत्य
चलचित्र ‘क्याप्टेन’को गीत सार्वजनिक गरिएको छ । गीतमा कलाकारहरु अनमोल केसी, भुवन केसी र निरुता सिंहलाई फिचर्ड गरिएको छ ।
म इन्डष्ट्रीको खम्बा होइन, इट्टा हुँ – अनमोल केसी
डिमाण्ड गरुन नगरुन चलचित्र निर्माताले अनमोललाई ५० लाख अनि प्रदिपलाई ४० लाख सम्म अफर गरेको खबरहरु आइरहन्छन् । यसबाट पनि उनीहरुको क्रेज थाहा हुन्छ । उनीहरुको क्रेजका कारण महङ्गो पारिश्रमिक दिएर भएपनि आफ्ना चलचित्रमा अनुबन्ध गर्न चलचित्रकर्मीहरु लालायित देखिन्छन् ।
अनमोललाई हेर्न २० हजार दर्शक !
चलचित्र क्याप्टेनको प्रचारका लागि अभिनेता अनमोल केसी नेपालगञ्जको खजुरा पुगेका छन् । महोत्सवमा उपस्थित झण्डै २० हजार दर्शकमाझ उनले आफ्नो चलचित्रको प्रचार गरेका छन् ।
क्याप्टेन गीत छायाँकन, भुवन नाच्दा अनमोल नर्भस !
चलचित्र ‘क्याप्टेन’को गीत छायाँकन गरिएको छ । गीतमा अनमोल केसी सहित भुवन केसी र निरुता सिंहले कम्मर मर्काएका छन् ।
अनमोल अभिनित चलचित्र ‘क्याप्टेन’को ट्रेलर सार्वजनिक
चलचित्र ‘क्याप्टेन’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा आयोजित एक बीच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो ।
अनमोल अभिनित चलचित्र ‘क्याप्टेन’को पोस्टर सार्वजनिक
अनमोल केसीको मुख्य भुमिका रहेको चलचित्र ‘क्याप्टेन’को पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । नयाँ दुई पोस्टरमा अनमोललाई खेलाडी
अनमोल अभिनित चलचित्र क्याप्टेन फागुन १७ मा प्रदर्शन हुने
चलचित्र क्याप्टेनको प्रदर्शन मिति तय गरिएको छ । फागुन १७ का लागि चलचित्रको प्रदर्शन मिति तय गरिएको हो ।